200T ကိုယ်ပိုင် Align လုပ်ခြင်း Rotate - တရုတ် Wuxi အောင်မြင်မှု Machinery
200T ကိုယ်ပိုင် Align လုပ်ခြင်း Rotate
ဝန်စွမ်းရည် - Set: 200 တန်ချိန်အများဆုံး
ဝန်စွမ်းရည် - Drive ကို: 100 တန်ချိန်အများဆုံး
ဝန်စွမ်းရည် - Idler: 100 တန်ချိန်အများဆုံး
လည်ပတ်စွမ်းရည်: 200 တန်ချိန်အများဆုံး
ရေယာဉ်များအချင်း: Min.1000mm ~ Max.6000mm
လည်ပတ်ပါဝါ: ပန်ကာအအေးနှင့်အတူ2*4KW
FOB စျေး:3။ * *** 00 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ကိုယ်ပိုင် aligned အကြံပေးအဖွဲ့လှည့်လိပ်သင်္ဘောအရပ်သို့လျှော့ချအခါအလိုအလျှောက်ချိန်ညှိဘီး centerline ညှိ။ ပြောင်းလဲပစ်ရန်မသစ်သားဆက်စရာနှင့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အဘယ်သူမျှမတံသင်သို့မဟုတ် replace.Self aligned ပိုက်ဂဟေ roller ရှိပါတယ်ယင်းကဆက်ပြောသည်နေစဉ်အလိုအလျှောက် set-တက်နှင့် alignment ကိုမြန်ဆန် easy.The အပြတ်အသတ်ချိန်ညှိ centerline settings ကိုလုပ်ရသောစဉ်ဆက်မပြတ် centerline စွမ်းရည်, tapered ရေယာဉ်များများအတွက်လွယ်ကူသော alignment ကိုပေးထောက်ပံ့ တစ်ယူနစ်4ဘီးမျက်နှာပြင်ဧရိယာပါးလွှာတံတိုင်းကာရံထားသောရေယာဉ်များများအတွက်အပိုဆောင်းထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။
ဤတွင်အောက်က 40T ဂဟေ roller သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်:
ဝန်စွမ်းရည် - Drive ကို 100 အတန်ချိန်အများဆုံး
ဝန်စွမ်းရည် - Idler 100 အတန်ချိန်အများဆုံး
ဝန်စွမ်းရည် - Set 200 တန်ချိန်အများဆုံး
လည်ပတ်စွမ်းရည် 200 တန်ချိန်အများဆုံး
ရေယာဉ်များအချင်း min ။ 1000mm ~ Max.6000mm
လည်ပတ်ပါဝါ ပန်ကာအအေးနှင့်အတူ2* 4kw
1. တသမတ်တည်း: တစ်ခုမှာစွမ်းအင်သုံး roller, တစ်ခုမှာ idler roller, လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်စနစ်က
2. လမ်း Adjust: အချင်းနှင့်အတူအလိုအလြောကျ 12 ပိုက်အချင်း Adjust - 110 လက်မ
3. ဗို့အား: 110V - 600 V ကို 50/60 Hz 1P / 3P ရရှိနိုင်သမျှသော
4. ထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်း: Remote လက်ထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာ / ကြိုးမဲ့လက်ထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာ
5. ကြိတ်စက်ပစ္စည်း: ရော်ဘာ / သံမဏိ / မှ PU (Nonferrous သတ္တု Polyurethane roller)
6. မူရင်း: Wuxi အောင်မြင်မှုစက် Co. , Ltd မှပေးဝေဂဟေပိုက်တစ်ခွင်
7. ကျနော်တို့တပြင်လုံးကိုဂဟေဆော်စက်အရည်အသွေး 12month အာမခံကာလသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂဟေ Rotate အားသာချက်:
1. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိအားရေယာဉ်များ Danfoss / Yaskawa ကနေလိပ်အင်ဗာတာဖြစ်ပါတယ် welding
ကြိတ်စက်ကုတင်မော်တော် 2.OurWelding Invertek နေ
3.Our ဂဟေအကြံပေးအဖွဲ့တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ကနေလျှော့ဖြစ်ပါတယ် roller လှည့်
4.Our ဂဟေ Rotate လျှပ်စစ်စနစ်က Schneider ကနေ
ပိုက်ဂဟေဆော်ခြင်း Roll အသုံးပြုမှု:
1. အလတ်စားအကွာအဝေးစီးရီးရှည်လျား Cylinder ပုံစံအလုပ်-အပိုင်းပိုင်း၏ထိရောက်သော positioning ကိုများအတွက်အင်ဂျင်နီယာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
2. ရေနံလှောင်ကန်, ဖိအားဖလား, ပိုက်လှည့်လိပ်အသုံးချကြောင်း applications များဖြစ်ကြသည်။
Cylinder ပုံစံမဟုတ် 3. Long ကအရာဝတ္ထုထုံးစံဒီဇိုင်းထောက်ခံမှုကွင်း၏အကူအညီနှင့်အတူအဆင်ပြေအောင်နိုင်ပါသည်။
4. ကျနော်တို့ဒီဇိုင်းကိုတာယာမထိခိုက်စေခြင်းမှအလွန်အကျွံဝန်တားဆီးကြောင်းချင်းစီဘီးပေါ်တွင် Overload discs တွေကိုထည့်သွင်း။
1. သင်ခြေလျင်နင်းထိန်းချုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကကိုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်သို့ပေးပို့သည့်အခါ, ငါ့ကိုအကြံပေးပါ။
2. ရွှေ့ပြောင်းပိုက်ဂဟေ roller ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
3. ကျနော်တို့ကိုသင်ဂဟေကော်လံကိုရှေးခယျြနှင့်အော်တိုအကြံပေးအဖွဲ့ဂဟေများအတွက် roller အတူအားကောင်းစန်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
4. ပုံမှန်အားဖြင့်ကျနော်တို့ကရော်ဘာပစ္စည်း roller ကိုအသုံးပြုဖို့ 60 သည် T မော်ဒယ်အထက်အောက်မှာကျနော်တို့သံမဏိပစ္စည်း roller ကိုအသုံးပြုပါ။
5. သင်၏အလုပ်အပိုင်းအစပစ္စည်း Nonferrous သတ္တုလျှင်, ငါတို့သည်မှ PU roller အကြံပြုအပ်ပါသည်။
6. ကိုယ်ပိုင် align လုပ်ဖို့ပိုက်ဂဟေ roller / Bolt က adjsutment / ခဲဝက်အူညှိနှိုင်းမှု / Rotate တက်ကွက်တိအားလုံးရရှိနိုင်ပါသည်။
ယခင်: 100T ကိုယ်ပိုင် Align လုပ်ခြင်း Rotate
နောက်တစ်ခု: 1 × 1 မီတာဂဟေဆော်ခြင်းခြယ်လှယ်
1. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ welding Tank ဖွင့် Rolls ခလုတ်နှင့်အတူ control.Manual ထိန်းချုပ်ထား panel ကိုစစ်ဆင်ရေးအများကြီးအဆင်ပြေစေသည်စံဝေးလံခေါင်ဖျားလက်ထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာနှင့်ခြေလျင်နင်းနှင့်အတူအားလုံးဖြစ်ကြသည်။
2. ပိုက်ဂဟေလှည့်လည်ပတ်မှုအတွက်ကြိုးမဲ့ / ရေဒီယိုလက်ထိန်းချုပ်မှုရရှိနိုင်ပါသော်လည်း, ပုံမှန်အားဖြင့်လေးလံသောတာဝန်နှင့်ရှည်လျားသောပိုက် / တင့်ကားသည်။
1. အမိန့်တဦးတည်း / နှစ်ခု Rotate welding စုံလျှင်, ကျွန်ုပ်တို့ LCL ရေကြောင်းများအတွက် installation ကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့သစ်သားအမှု၌ထုပ်ပိုးပါလိမ့်မယ်။
3.We တပြင်လုံးကိုစက်အရည်အသွေး 1year အာမခံကာလသည်။
1. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ (Wuxi အောင်မြင်မှု Machinery & ပစ္စည်း CO ။ , LTD မှ) လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကျော်ကိုနိုင်ငံပေါင်း 30 မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂဟေ Rotate တင်ပို့ကြသည်။ ဥရောပ & အမေရိကားစတော့ရှယ်ယာရရှိနိုင်ပါသည်။
ရော်ဘာ & သံမဏိဘီးနှင့်အတူ roller လှည့်မက္ကစီကို 30T မိမိကိုယ်ကို Align လုပ်ခြင်းပိုက်ဂဟေ
ITALY 40T နှင့် Pu ဘီးနှင့်အတူ 100T Tank ဂဟေ Rotate
ဂဟေဆော် butting ရှည်လျားအပိုင်းပိုင်းအဘို့ရွှေ့ပြောင်းနယ်လှည့ wheel နဲ့အလုပ်လုပ်အမေရိကန် 40T self align ပိုက်ဂဟေ roller
100t Tank Turning Rolls
10t Tank Turning Rolls
200t Tank Turning Rolls
20t Tank Turning Rolls
30t Tank Turning Rolls
40t Tank Turning Rolls
50t Pipe Turning Welding Rolls
50t Tank Turning Rolls
5t Tank Turning Rolls
60t Tank Turning Rolls
Adjustable Tank Turning Roll
Automatic Pipe Roller
Bolt Adjustable Welding Rotator
Cylinder Pipe Welding Rotator
Pipe Steel Welding Rotators
Pipe Welding Roller Stand
Professional Factory Welding Rotator
Self Adjustable Welding Rotator
Welding Turnig Rolls
100T ကိုယ်ပိုင် Align လုပ်ခြင်း Rotate
20T Rotate welding တက်ကွက်တိ
ခြယ်လှယ် welding3×3မီတာ